ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ဆုတောင်းခြင်း။ ? ကလေးများအတွက်အကာအကွယ်
ခရစ်တော်၏အသွေးတော်၏ဆုတောင်းချက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကက်သလစ်ချာ့ချ်၌ရှိသည့်အရာများအနက်ခရစ်တော်၏အသွေးသည်တန်ခိုးအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်အားဆုတောင်းခြင်း.
အိုအဘ၊ အကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါရစေ၊ အကျွန်ုပ်တောင်းလျှောက်သောစကားကိုကြားတော်မူပါ။ စိတ်သောကရောက်ပါပြီ။ အကျွန်ုပ်၏သားသည်အပေါင်းအသင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်။ ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်တန်ခိုးကို၊ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့တောင်းပန်ပါလော့၊ သခင်ဘုရားသည်သူ့ကိုလူကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်စေရန်ကြိုးစားပါ။
ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖဘုရား၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သား၏စိတ်ကိုသန့်ရှင်းစေတော်မူပါ။ သူ့ကိုသင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်အသွေးတော်အားဖြင့်သန့်ရှင်းစေခြင်း၊ မကောင်းမှု၊ မုန်းတီးမှု၊ နာကြည်းခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဝေဒနာမခံစားရဘဲကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ၎င်းကိုသင်၏အဖိုးတန်အသွေးတော်အားဖြင့်ကာကွယ်ရန်စွမ်းအားကိုပုံသွင်းပေးသည်။
အရာရာကိုသိပြီးအရာရာကိုသိမြင်တော်မူသော၊ ကရုဏာရှင်ဘုရားသခင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိဘများဖြစ်ကြပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာများဖြစ်လိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဥာဏ်ပညာပေးသည်။ ထိုသူတို့နှင့်နားလည်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါ။ သင့်အသက်မည်မျှရှိသည်ကို၎င်း၊ သူတို့သည် ပို၍ နာမငြိမ်၊
ငါတို့မှာဖြစ်ပျက်နိုင်သမျှအလှဆုံးအရာတွေရှိတဲ့ကလေးတွေ။ Are ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏အသီးအပွင့် ငါတို့အသက်တာ၌သူတို့အတွက်အရာအားလုံးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပြည့်သောဤကမ္ဘာပေါ်တွင်သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိကြသည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်မိဘများအနေဖြင့်သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံများနှင့်သွေးသည်တတ်နိုင်သည့်အချိန်များတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်သောအချိန်များရှိသည် Cristo ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်လာတယ်။
သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသွေးတော်၊ မစင်ကြယ်သောလူသားနှင့်ဘုရားသခင့်အသွေးတော်၊ ကျွန်ုပ်ကိုဆေးကြောပါ။ ခွန်အားပေးသောသွေးသန့်စင်ခြင်း၊ သင်၏ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်၌သင်၏ Eucharistic ရှိနေခြင်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ သင်၏စွမ်းအားနှင့်ချိုခြင်းကိုငါယုံကြည်သည်။ ငါ့ကိုမကောင်းမှုအားလုံးမှကာကွယ်ရန်သင်အားယုံကြည်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏နက်ရှိုင်းသောနေရာမှတောင်းခံသည်။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ၊
လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်သွန်းလောင်း။ ယေရှု၏မြင့်မြတ်သောနှလုံးသား၌လှုပ်ရှားနေသည့်အဖိုးတန်အသွေးသည်ကျွန်ုပ်ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပါ၏။ ကျွန်ုပ်သည်ကယ်တင်ခြင်းရသူများ၊ ကျေးဇူးတော်မှကယ်တင်ခြင်းရရှိသောကြောင့်ကိုယ်တော်၏အသွေးတော်နှင့်သင်၏အသက်တာကိုကျေးဇူးတင်ပါ၏။ ငါတို့ပတ်ပတ်လည်မကောင်းတဲ့အရာအားလုံး။
သခင်ယေရှုဘုရားသည်ကျွန်ုပ်၏အသွေးတော်နှင့်အဖိုးထိုက်သောလက်ဆောင်ကိုပေးသနားတော်မူပြီးကရာနီ၌သတ္တိနှင့်ရက်ရက်ရောရောလက်နက်ချခြင်းအားဖြင့်သင်တို့သည်ငါ့ကိုအစွန်းအထင်းများမှသန့်စင်စေ။ ကျွန်ုပ်၏ရွေးနှုတ်ခြင်း၏တန်ဖိုးကိုသွန်းလောင်းခဲ့သည်။ အိုဘုရားသခင်ခရစ်တော်သည်ကျွန်ုပ်၏အသက်တာဖြစ်သောကျွန်ုပ်၏အသက်တာဖြစ်ပါစေ၊ ကျွန်ုပ်ကိုအသက်တာကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုသည်၊ ကိုယ်တော်သည်လူသိများသောကျေးဇူးတော်၏ရင်းမြစ်ဖြစ်တော်မူသည်။ ဘုရားသခင်၏သားသမီးများအားပေးသောဘုရားသခင်၏ကြီးမြတ်သောဆုကျေးဇူးတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ထာဝရမေတ္တာတော်၏စမ်းသပ်မှုနှင့်ကတိတော်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏အားနည်းချက်၊ ကျွန်ုပ်၏အားနည်းချက်နှင့်ကျွန်ုပ်ကိုဝိုင်းရံနေသောဘေးဥပဒ်မှငါ့ကိုကာကွယ်ရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုကျွန်ုပ်အားအပြည့်အဝနားလည်နိုင်ရန်သင်၏ခွန်အားနှင့်စွမ်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စေသည့်အခွင့်အရေးအားလုံးကိုတန်ဖိုးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုကျော်။ အမြဲတမ်းဝတ်ဆင်သောမာရ်နတ်၏တပ်မက်မှုများ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုမှောင်မိုက်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမကြာခဏအန္တရာယ်ပြုလေ့ရှိသောမကောင်းသောတန်ဆာများမှလွတ်မြောက်စေသောတော် ၀ င်အသွေးတော်ဖြစ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဤဆုတောင်းခြင်းသည်မိသားစုသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ် ဦး နှင့်အတူပြုလုပ်နိုင်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်ရမည်ကို၎င်း၊ ဆုတောင်းခြင်းသည်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
ပြmostနာများသည်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ နေ၍ သင်ကိုထိခိုက်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အိပ်မောကျသောညများ၌ရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏ပြtheနာအခြေအနေကိုစဉ်းစားခြင်းဖြင့်အလွန်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သခင်ယေရှု၊ သင်၏နာမ၌လည်းကောင်း၊ အဖိုးတန်အသွေးတော်၏တန်ခိုးဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရန်သူကကျွန်ုပ်တို့အားအန္တရာယ်ဖြစ်စေရန်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်များ၊ အဖြစ်အပျက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တံဆိပ်ခတ်ထားသည်။
ယေရှုအသွေးတော်၏တန်ခိုးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖျက်စွမ်းအားအားလုံးကိုလေ၊ မြေ၊ ရေ၊ မီး၊ မြေကြီးအောက်၊ စာတန်၏သဘာဝစွမ်းအားများ၊ el Mundo ငါတို့ယနေ့ရွှေ့မည်။
သခင်ယေရှု၏အသွေးတော်တန်ခိုးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုးယုတ်သူ၏ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုပြုသည်။
စိန့်မိုက်ကယ်၊ စိန့်ဂါဘရီရယ်၊ စိန့်ရာဖေးလ်နှင့်သူ၏တန်ဆန့်အိန်ဂျယ်လိစ်တရားရုံးတို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏နေအိမ်များနှင့်အလုပ်ခွင်များသို့မင်္ဂလာရှိသောအပျိုစင်ကိုစေလွှတ်ရန်ယေရှုအားကျွန်ုပ်တို့တောင်းပန်သည်။
သခင်ယေရှုစေလွှတ်တော်မူသောလူများ၊ ငါတို့စားစရာဘို့ငါတို့အားပေးတော်မူသောအစားအစာနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုသခင်ယေရှုအသွေးတော်၏တန်ခိုးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်နှင့်အိမ်သူအိမ်သားများအားတံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ ထောက်ခံမှု
သခင်ယေရှု၏အသွေးတော်တန်ခိုးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြေကြီး၊ တံခါးများ၊ ပြတင်းပေါက်များ၊ အရာဝတ္ထုများ၊ နံရံများနှင့်ကြမ်းပြင်များကိုတံဆိပ်ခတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှူရှိုက်နေသောလေနှင့်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သူ၏အသွေးအသွေးကိုမိသားစုတစ်စုလုံးချထားသည်။
သခင်ယေရှု၏အသွေးတော်၏တန်ခိုးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေမည့်နေရာများ၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်ဆံမည့်လူများ၊ ကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများကိုတံဆိပ်ခတ်ထားသည် (တစ်ခုချင်းစီကိုဖော်ပြပါ) ။
သခင်ယေရှု၏အသွေးတော်တန်ခိုးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ် ၀ တ္ထုနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာလုပ်ငန်း၊ မိသားစုတစ်ခုလုံး၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ယာဉ်များ၊ လမ်းများ၊ လေများ၊ လမ်းများနှင့်မည်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုမဆိုတံဆိပ်ခတ်ရမည်။
သင်၏အဖိုးထိုက်သောအသွေးတော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာပြည်နှင့်ခေါင်းဆောင်များအားလုံး၏လုပ်ရပ်များ၊ စိတ်များနှင့်စိတ်နှလုံးများကိုတံဆိပ်ခတ်။ နောက်ဆုံးတွင်သင်၏ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်သင်၏နှလုံးသားအုပ်စိုးပါလိမ့်မည်။
မကောင်းသောသူသည်ငါတို့ကိုမထိစေခြင်းငှါ၊ တန်ခိုးကြီးသောအသွေးတော်သည်ငါတို့ကိုဝန်းရံလျက်ရှိ၏။ ငါတို့ရော၊ ကလေးသူငယ်ရောမိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေရော၊
ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် ဓမ္မသစ်ကျမ်း ထိုအိမ်၏တံခါးများ၌သွေးကိုအကာအကွယ်ပေးသည့်အမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ်ဖြန်းပေးခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူကျွန်ုပ်တို့လည်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည် ငါတို့၏အိမ်တံခါးဝ၌ခရစ်တော်၏အသွေးကိုဝင်စားလျက်ရှိသည် နှင့်ငါတို့နှင့် မကောင်းသောအမှုအရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါ.
ခမည်းတော်၏ဘုရားသခင်၊ သားတော်၏နာမ၌၎င်း၊ ဘုရားသခင်၏နာမတော်အားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် - သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏သွေးတော်၏တန်ခိုးနှင့်ကျွန်ုပ်၏သတိ၊ သတိလစ်။ မသိသော၊ ကျွန်ုပ်၏နှလုံး၊ ခံစားချက်၊ အာရုံ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တည်မှု၊ စိတ်ပိုင်း၊ ရုပ်ပစ္စည်းနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာဖြစ်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်သမျှ၊ ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်သမျှ၊ ကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သမျှ၊ ကျွန်ုပ်သိသမျှနှင့်ကျွန်ုပ်ချစ်သောအရာခပ်သိမ်းသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏သွေးတော်၏တန်ခိုးဖြင့်တံဆိပ်ခတ်။ ကာကွယ်ထားသည်။ အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ကိုမစခြင်းငှါအလျင်အမြန်ကြွလာတော်မူပါ။
ကျွန်ုပ်၏အတိတ်၊ ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်ကိုတံဆိပ်ခတ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အစီအစဉ်များ၊ ရည်မှန်းချက်များ၊ အိပ်မက်များ၊ ထင်ယောင်ထင်မှားများ၊ ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်သမျှ၊ ကျွန်ုပ်စတင်သမျှ၊ ကျွန်ုပ်စဉ်းစား၊ ပြုလေသမျှ၊ ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်ဖြင့်ကောင်းစွာတံဆိပ်ခတ်။ ကာကွယ်ထားသည်။ သခင်ဘုရား၊ အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၊ အကျွန်ုပ်ကိုမစခြင်းငှါအလျင်အမြန်ကြွလာတော်မူပါ။
ကျွန်ုပ်၏လူ၊ ကျွန်ုပ်၏မိသားစု၊ ကျွန်ုပ်၏ပိုင်ဆိုင်ရာများ၊ အိမ်၊ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်၊ ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေး၊ ကျွန်ုပ်၏မိသားစုပင်ကို၊
သခင်ယေရှုဒဏ်ရာရသောဒဏ်ရာထဲတွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပုန်းအောင်းနေပြီးဗာရာဏသီ၏မာရိ၏စင်ကြယ်သောနှလုံးသား၌ပုန်းအောင်းနေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏ဆိုးညစ်သောစကားများ၊ အပြုအမူများ၊ မကောင်းသောဆန္ဒများ၊ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘ ၀၊ စီးပွားရေး၊ ကျွန်ုပ်ကျန်းမာရေး၊ သူတို့၏နာမကျန်းမှုများ၊ မနာလိုမှု၊ မျက်လုံးများ၊ အတင်းအဖျင်းများနှင့်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချမှုများနှင့်အတူမှော်၊ စာလုံးပေါင်း၊
ငါ့ဝတ္ထုတစ်ခုလုံးသည်တံဆိပ်ခတ်ပြီး၊ ပတ်ပတ်လည်ရှိအရာအားလုံးကိုတံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ ငါ……။ ကျွန်ုပ်၏ရွေးနုတ်ရှင်၏အဖိုးတန်ဆုံးအသွေးတော်ဖြင့်အစဉ်အမြဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခံရ၏။
ဆုတောင်းပါ ဆုတောင်းပဌနာ ကြီးမားသောယုံကြည်ခြင်းဖြင့်နေ့စဉ်ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ဖြစ်သည်။
အစွမ်းထက်သောဘုရားသခင့်မျက်မှောက်တော်မှတစ်ဆင့်နေ့သစ်ကိုတင်ဆက်ရန်နံနက်အချိန်၌ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကိုးရက်ကြာဝါကျဆက်တိုက်ပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်ဆုတောင်းနိုင်သည်။ အရေးကြီးတာကအဲဒါကိုမလုပ်ဖို့ပါ။